Olee otú Iji mgbọrọgwụ Galaxy Tab 2 7.0 P3100 / P3110 / P3113 Iji CF-Nchekwa onwe-Nkpọrọgwụ
A nkuzi bụ nanị n'ihi na ngwaọrụ n'okpuru:
Ọ bụrụ na ị na-adịghị eji bụla n'ime ha, na-adịghị agbaso a ndu kwụsịrị ngwaọrụ gị. Ma ọ bụ ọ ga-mebiri emebi. Dị nnọọ ịchọ ọzọ ndu kwesịrị ekwesị maka ya.
Jide n'aka na nke a tupu ị malite:
1) I nwere ihe karịrị 80% batrị na ngwaọrụ gị.
2) Ị kwadoo ndị dị mkpa data na ngwaọrụ gị.
3) Ị na-anabata ya na dịrị ga ndum gị akwụkwọ ikike.
Download ngwaọrụ maka dịrị usoro
1. Download CF-Nchekwa onwe-Nkpọrọgwụ ngwugwu n'okpuru maka ngwaọrụ gị.
CF-Auto-Root-espressorf-espressorfxx-gtp3100.zip (n'ihi na P3100) CF-Auto-Root-espressowifi-espressowifiue-gtp3113.zip (n'ihi na P3113) CF-Auto-Root-espressowifi-espressowifixx-gtp3110.zip (n'ihi na P3110 ) 2. Download Odin3
Nzọụkwụ 1. Wepụ CF-Nchekwa onwe-Nkpọrọgwụ faịlụ na ị ga-ahụ a .tar faịlụ. Na-ahapụ ya naanị na-aga nzọụkwụ ọzọ.
Nzọụkwụ 2. Wepụ Odin3 faịlụ, na mgbe ahụ ị ga-ahụ a .exe faịlụ. Ugboro abụọ pịa na-agba ọsọ ya na kọmputa gị.
Nzọụkwụ 3. Akọrọ anya igbe n'ihu PDA na window nke Odin3, wee na-agagharị iji họrọ .tar faịlụ na ibu ya na.
Nzọụkwụ 4. Mgbe ahụ ego igbe nke Nchekwa onwe-Reboot na F.Reset Time, na-ahapụ Re-nkebi igbe kpacharaghị.
Nzọụkwụ 5. Ugbu a Gbanyụọ ngwaọrụ gị. Wee pịa Ike + Mpịakọta Down buttons ọnụ maka banyere sekọnd ole na ole ruo mgbe ị na-ahụ ịdọ aka ná ntị ozi pụtara na ihuenyo, wee pịa Mpịakọta Down bọtịnụ. Chere ruo mgbe ngwaọrụ gị na-ibidogharịa na Download mode.
Nzọụkwụ 6. Ina ngwaọrụ gị jikọọ na kọmputa na iji eriri USB. Mgbe Odin3 achọpụta ngwaọrụ gị, ị ga-ahụ a odo-pụta ìhè n'ọdụ ụgbọ mmiri n'okpuru ID: Com. Mgbe ahụ ịga n'ihu.
Cheta na: Ọ bụrụ na ị hụghị odo-pụta ìhè n'ọdụ ụgbọ mmiri, ị kwesịrị ị na unstall eriri ọkwọ ụgbọala maka ngwaọrụ gị (Ị nwere ike ibudata ya ebe a).
Nzọụkwụ 7. Pịa Malite bọtịnụ na Odin3 na-amalite dịrị ngwaọrụ gị ugbu a. Akwụpụla ngwaọrụ gị n'oge usoro a. Ọ ga-eri gị a obere mgbe. Mgbe ọ na-completes, ị pụrụ ịhụ a-agafe! Ozi na window. Mgbe ahụ ngwaọrụ gị ga Malitegharịa ekwentị site n'onwe ya, na dum dịrị usoro bụ n'elu. Ị na free ime ihe ọ bụla ị chọrọ ugbu a.
Olee otú Iji mgbọrọgwụ Galaxy S gt-I9000 na Android 2.3.6 XXJVU femụwe
Olee otú Iji mgbọrọgwụ Samsung Galaxy Nexus (gt-I9250) Na-agba ọsọ Android 4.2.1
> Resource> Nkpọrọgwụ Atụmatụ> Olee otú Iji mgbọrọgwụ Galaxy Tab 2 7.0 P3100 / P3110 / P3113 Iji CF-Nchekwa onwe-Nkpọrọgwụ